Software software – Windows – Vessoft
qalab A awood for khariidad ee waraaqaha heerka xirfadeed. software The qalabeysan yahay qalab gaar ah nidaaminta document sare.
Software in la abuuro Casharrada iyo bandhigyo. Software waxa uu leeyahay muuqaalada badan oo waxtar leh oo awood u ah in la isticmaalo faylasha image of qaabab kala duwan ah.
software la files xafiiska of qaabab kala duwan u shaqeeyo oo uu leeyahay shaqeynta weyn oo ka kooban a habyaalada heli karo.